FBA FCL Amin'ny Ranomasina Avy any Shina ka hatrany Etazonia
FBA LCL Amin'ny Ranomasina Avy any Shina mankany Etazonia
FBA AIR Avy any Shina ka hatrany Etazonia
FBA Express avy any Shina ka hatrany Etazonia
FBA Famindrana trano fivarotana any ivelany
Fanovozan-kevitra momba ny vidiny avy any Sina mankany Etazonia
Vidin'ny fanovozan-kevitra Amazon Warehouse
Vokatra bateria L Reference momba ny vidin'ny LCL
Rindrambaiko momba ny serivisy
Horonan-tsary FBA Cargoes Operation
Sokajy kiraro akanjo
Sokajy vokatra ivelany
Trano fanaka an-dakozia
Mila fanamarinana kitapo mampidi-doza ve ny fanondranana bateria lithium scooter elektrika? Inona ny taratasy fanamarinana kitapo mampidi-doza?
Ny scooter elektrika dia tsy vitan'ny hoe malaza any Shina fotsiny satria misy ny tombony toy ny hazavana, ny dian-tongotra kely ary ny fandidiana tsotra, fa koa ny safidy voalohany amin'ny fitaterana lavitra any ampitan-dranomasina. Ny scooter elektrika dia vokatra be mpividy any Amazon any Etazonia, raha ireo ...Hamaky bebe kokoa »
Mandra-pahoviana no fandefasana bisikileta elektrika sy scooter avy any Shina mankany Etazonia？
Voalaza fa ny taona 2021 no taona maizina indrindra ho an'ireo mpivarotra e-varotra amoron-tsisintany, ary ny Etazonia Etazonia dia nandrara kaonty 3.000 an'ny mpivarotra sinoa ao anatin'ny volana vitsivitsy. Ny antony lehibe dia ny fisian'ny hevitra tsy ara-dalàna ao amin'ireo kaonty ireo. Raha tsorina, ireo kaonty mpivarotra sinoa ireo dia miborosy ...Hamaky bebe kokoa »
Fandefasana fandefasana entana vita amin'ny bateria lithium avy any amin'ny Seranana Yantian any Shenzhen mankany Etazonia
Vao tsy ela akory izay, lohahevitra iray vaovao fa nitombo 10 heny ny entam-barotra an-dranomasina ary tsy misy kaontenera voatanisa akory fa nahatratra ny fikarohana mafana. Tamin'izany fotoana izany, faly ny fanontana kely an'ny YiXing Global Logistics: hitan'ny besinimaro ihany ny toe-javatra mampahonena fa avo ny entana eto amin'ny ranomasina mpivarotra ary ny ...Hamaky bebe kokoa »
LCL bisikileta elektrika avy any Shina mankany Etazonia miaraka amina serivisy mazava ho an'ny varavarana
Amin'ny varotra importa sy fanondranana e-commerce cross-border, ny fanondranana ireo vokatra mandeha amin'ny herinaratra dia mitaky fizarana tsena lehibe. Na dia maro aza ny antony mampidi-doza amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina iraisam-pirenena amin'ny bateria lithium, tsy afaka manakana ny varotra avo lenta izy ireo. Ohatra, Electric sc ...Hamaky bebe kokoa »
Ny FBA any Etazonia dia hiakatra amin'ny 30 septambra ny sarany fandefasana lavitra
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay dia nahita fiakarana marobe isika, sarany VINA, fiantohana tsy maintsy atao ary saram-barotra (any Eropa). Miakatra ihany koa ny saram-pandefasana lavitra lavitra an'ny FBA (tsy sarany fandefasana multichannel). Ity mailaka manaraka ity: nanambara ny mailaka Amazon: Nanomboka ny taona 2018, ireo orinasa mandray anjara amin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Mba hamahana ny vidin'ny fiakaran'ny vidim-piainana iraisam-pirenena, nandray fepetra mahomby ny minisiteran'ny Varotra
Ny vidin'ny fandefasana dia nihoatra ny avo 10 heny hatramin'ny nipoiran'ny fipoahana tamin'ny taona 2020. Ho fanampin'izay, ny tapany faharoa amin'ny taona dia ny vanim-potoana fandefasana entana avo indrindra, miaraka amin'ny fangatahana matanjaka sy ny tsy fahampian'ny fitaterana, ny vidin'ny fandefasana entana iraisampirenena dia mirongatra. Ny mpivarotra sasany dia mampiseho fa ampitahaina amin'ny c ...Hamaky bebe kokoa »
Ho an'ny mpivarotra sinoa dia namoaka ny politika farany fandefasana entana farany indrindra i Amazon!
Ny tranokalan'i Etazonia dia manana fanambaràna vaovao: Ny fanambarana dia milaza fa manomboka amin'ny 9 Aogositra 2021, ny fonosana nalefa mivantana avy tany Chine ho an'ny mpanjifa dia tokony hameno ireto fepetra manaraka ireto: ny fonosana manana sanda feno sy entana tsy latsaky ny $ 5 dia tokony hanana drafi-pandefasana azo zahana miaraka. ..Hamaky bebe kokoa »
Dingana fanafoanana ny kaonty mpivarotra Amazon
Niresaka momba ny fomba fanokafana fivarotana amin'ny Amazon aho. Raha tsy vitako izany, inona no tokony hataoko raha te hanafoana ny kaontin'ny mpivarotra aho? Avy eo, ndao hiresaka matotra momba ny fomba fanalana ny kaonty mpivarotra Amazon, inona ny tena fizotrany, andao lazaina tsirairay. Amazon highligh ...Hamaky bebe kokoa »
Inona no tokony hataon'ny mpivarotra FBA rehefa mahazo mailaka POA izy ireo?
Vao tsy ela akory izay, rehefa nitsidika ireo dinika mifandraika amin'izany ao Amazon aho dia nahita mpiserasera marobe nametraka fanontaniana maika. Angamba ny olana dia voarara tsy hamidy ny vokariny amidy eo amin'ny lampihazo Amazon noho ny asa tsy ara-dalàna, ary ny mpivarotra dia tsy maintsy mampiseho ny POA hampihatra amin'ny laoniny ny famerenana amin'ny laoniny. Maro ny mivarotra ...Hamaky bebe kokoa »
Ahoana ny fomba hiatrehana ireo akora simika an-dranomasina FBA?
Amin'ny maha-mpitatitra lozisialy iraisam-pirenena antsika dia tsy maintsy miresaka momba ny fahatsapana mahazatra momba ny fanondranana simika an-dranomasina isika. Inona no fampahalalana ilaina amin'ny fanondranana simika (mampidi-doza)? FCL: alohan'ny hamandrihana toerana, ny antontan-taratasy roa etsy ambony dia tsy maintsy aseho amin'ny fangatahana sy ny fankatoavan'ny tompon-tsambo. Matetika tak ...Hamaky bebe kokoa »
Inona avy ireo mpikopy afa-tsy Matson sy ZIM Clippers? Inona no maha samy hafa ny clipper sy ny sambo ankapobeny?
Fantatsika rehetra fa ny sambo clipper, ny sambo clipper dia manana tombony amin'ny fotoana haingana, tsingerina famenoana fohy sns. Tao anatin'izay roa taona izay, tsy dia ampy ny fahaiza-mitatitra manerantany, seranana marobe ny fanemorana fitohanana, tsy fisian'ny kaontenera sy toe-javatra hafa, mpivarotra maro no ...Hamaky bebe kokoa »
Hisy ve ny varotra raha mandefa FBA ianao?
Matetika ny mpivarotra Amazon dia manontany hoe: namoaka FBA aho, maninona raha ny varotra, mieritreritra fa tsy dia tsara toa ireo entana tampoka teo io, tsy mahatakatra ny antony? Raha ny amin'ny tena fiasan'ny Amazon, ny zavatra voalohany azo antoka dia ny tetik'asa dia tetikasa ambaratonga maro, anisan'izany ny singa maro ...Hamaky bebe kokoa »
Ny bateria lithium scooter elektrika ve exp ...
Maharitra hafiriana ny fandefasana herinaratra-bi ...
Fomba fandefasana amin'ny fanondranana ny ramanavy lithium ...